Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Tuesday, November 16, 2010 Tuesday, November 16, 2010 Labels: နှစ်သက်မိသော စာစုများ
ဒေါက်တာ မာရီလင်က ကျွန်မတို့ ၀န်ထမ်းတွေကို Staff meeting မှာ မိန့်ခွန်းတစ်ခုပြောပါတယ်.. သူဟာ ကျွန်မတို့ကို ကျွန်မတို့ရဲ့ စိတ်အာရုံတစ်ခုလုံးကို အကောင်းမြင်တဲ့ ရှုထောင့်ကနေ ပိုပြီး ကြည့်တတ်ဖို့ အလေ့အကျင့်လေးတွေကိုလည်း သင်ကြားပြောပြပါတယ်.. သူက “မျက်လုံးလေးတွေ မှိတ်လိုက်ပြီးတော့ မင်းတို့ရဲ့ ငယ်စဉ်က အကြောင်းလေးတွေကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်.. ငယ်ငယ်တုန်းက မင်းတို့ရဲ့ဘ၀မှာ အဖြစ်ချင်ခဲ့ဆုံး တစ်ခုက ဘာလဲ… အဲဒီအချိန်တုန်းက မင်းတို့ရဲ့ အိပ်မက်က ဘာတွေများ ဖြစ်မလဲ… မျက်လုံးလေးပိတ်ပြီး ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြပါနော်….” ဆိုပြီး သူက ကျွန်မတို့ကို သူရဲ့သြဇာပြည့်ဝ ကြည်လင်တဲ့အသံနဲ့ လွှမ်းမိုးပြောဆိုပါတယ်..
ကျွန်မ မျက်လုံးလေးကို အသာမှိတ်လိုက်ပြီး ကျွန်မ ငယ်ငယ်က အကြောင်းတွေ ပြန်စဉ်းစားပါတယ်.. “ကျွန်မ ငယ်တုန်းက ဘာဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါလိမ့်… စဉ်းစားစမ်း.. သေချာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦး..” ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောရင်း ကျွန်မရဲ့ မှတ်ဥာဏ်တွေကို အလုပ်ပေးလိုက်မိတော့ “အိုး.. သိပြီ.. ကျွန်မ သတိရပြီ.. ငယ်တုန်းက ကျွန်မဘာဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သတိရလိုက်ပါပြီ..”
ဒေါက်တာ မာရီလင်က သူ့ရဲ့ ငယ်စဉ်က အဖြစ်ချင်ခဲ့ဆုံးဆန္ဒက စာရေးဆရာမလို့ ပြောပါတယ်.. ခုချိန်မှာတော့ သူဟာ ဆောင်းပါးတွေ များစွာကို ရေးသားခဲ့တယ်.. ထုတ်ဝေခြင်းခံခဲ့ရတယ်. ဒါပေမဲ့ အဲဒီဆောင်းပါးတွေအတွက် သူဟာ အခကြေးငွေ မယူခဲ့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်.. ဒေါက်တာ မာရီလင်ရဲ့ စကားက ကျွန်မရဲ့ နှလုံးသားကို ရိုက်ခတ်သွားစေခဲ့ပါတယ်..
ကျွန်မ ငယ်ငယ်တုန်းကလည်း ကျွန်မတို့အိမ်နဲ့ မနီးမဝေး လမ်းထောင့်က ဆေးဆိုင်လေးတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်မအသက်နဲ့စာရင် အလုပ်လုပ်ဖို့ သိပ်ကို ငယ်ရွယ်သေးတဲ့အချိန် ဖြစ်ပေမဲ့ အဲဒီဆေးဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မရဲ့အဖေက အဲဒီဆိုင်ပိုင်ရှင် ဖြစ်လို့ပါ။ ဖေဖေက ကျွန်မတို့ကို ပိုက်ဆံရဲ့ တန်ဖိုးကိုနားလည်အောင်၊ အလုပ်ကို ချစ်တတ်လာအောင် သင်ကြားပေးတဲ့အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်စေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်.. အဲဒီအလုပ်ကနေ ကျွန်မအတွက် အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီးရခဲ့သလို ဘ၀ကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ခွန်အားတွေလဲ ရရှိခဲ့ပါတယ်.. အလုပ်ကိုလည်း ဂရုတစိုက်လုပ်တတ်လာသလို ကိုယ်ရဲ့လုပ်အားနဲ့ ရတဲ့ ငွေကြေးကိုလည်း တန်ဖိုးထားတတ်လာခဲ့ပါတယ်..
အဲဒီဆေးဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ချိန်က ကျွန်မဟာ ဖေဖေ့ဆီမှာလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ အလုပ်ချိန်မှာ မခိုမကပ်နဲ့ အလုပ်ကို ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ပါတယ်.. အလုပ်နားချိန်ဖြစ်တဲ့ နေ့လည်စာစားချိန်ကိုလည်း ကျွန်မဟာ တန်ဖိုးထားပါတယ်.. အစားအသောက်အတွက်ကြောင့် တန်ဖိုးထားတာမဟုတ်ဘဲ အဲဒီ ခဏနားရတဲ့ အချိန်လေးမှာ ကျွန်မဟာ ရုပ်ပြစာအုပ်တွေကို သည်းကြီးမည်းကြီး ဖတ်ပါတယ်.. အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေ၊ ဟာသတွေ ဖတ်တာမဟုတ်ပါဘူး.. ကျွန်မဖတ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေက စွန့်စားခန်းတွေပါတဲ့ အက်ရှင်ကာတွန်းစာအုပ်တွေပါ.. အဲဒီစာအုပ်တွေထဲက လူစွမ်းကောင်းတွေ၊ သူရဲကောင်းတွေက ကျွန်မရဲ့ ငယ်စဉ်ဘ၀ကို လွှမ်းမိုးခဲ့တယ်.. သူတို့ရဲ့ အနစ်နာခံမှုတွေ၊ လူထုအတွက် အကျိုးပြုခဲ့ပုံတွေ၊ လူတွေကို ကယ်တင်ခဲ့ပုံတွေ၊ မကောင်းမှုဘက်တော်သားတွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပုံတွေ၊ ပြီးတော့ လူထုက သူတို့ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြပုံတွေ အားလုံးဟာ အားကျစရာ၊ လေးစားစရာတွေချည်းပါဘဲ.. ကျွန်မလေ သူတို့ရဲ့ ဘ၀ကို အားကျခဲ့တယ်.. သူတို့လို ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်..
ဟုတ်တယ်.. အခု မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ ကျွန်မ ငယ်စဉ်ခါက ဘာဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျွန်မရဲ့အာရုံမှာ ပြက်ပြက်ထင်ထင် ပေါ်လာတယ်.. ကျွန်မ ဘာဖြစ်ချင်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ လူတွေကို အကျိုးပြုတဲ့ လူစွမ်းကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ…. အက်ရှင်ကာတွန်းတွေဖတ်ပြီး ကျွန်မ အားကျခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်လိုက် လူစွမ်းကောင်းတစ်ချို့တွေက စူပါမင်း၊ လင်းနို့လူသား၊ ပင့်ကူလူသား၊ သံမဏိလူသား စတာတွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်.. သူတို့တွေဟာ ငယ်စဉ်ဘ၀ ကျွန်မဖတ်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ပြ စာအုပ်တွေထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မရင်ထဲက လူစွမ်းကောင်းတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်.. သူတို့လို လူစွမ်းကောင်းတွေဟာ ထူးခြားထင်ရှားတဲ့ အချက်နှစ်ချက်နဲ့ လူသားတွေ ဖြစ်ကြတာကို သတိထားမိပါတယ်..
ပထမတစ်ချက်က အဲဒီ လူစွမ်းကောင်းတွေဟာ ကောင်းမှုနဲ့ မကောင်းမှုတို့ရဲ့ အားပြိုင်မှုတွေ၊ တိုက်ပွဲတွေကြားထဲမှာ ကောင်းမှုဘက်ကနေ အမြဲတမ်း တိုက်ပွဲဝင်ရသူတွေ၊ ရပ်တည်ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်.. မကောင်းမှုဘက်က တိုက်ခိုက်လာတဲ့ အလွန်ကြီးမားတဲ့ ရန်သူတွေ၊ အခက်အခဲတွေ၊ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲမှုတွေနဲ့ လူစွမ်းကောင်းတွေဟာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရပေမဲ့ ဘယ်လောက်ဘဲ အင်အားကြီးမားတဲ့ ရန်သူတွေဘဲ ဖြစ်ပါစေ.. ကောင်းမှုဘက်က ရပ်တည်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့ လူစွမ်းကောင်းတွေကသာ နောက်ဆုံးမှာ အနိုင်ရသွားကြပါတယ်..
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ လူစွမ်းကောင်းတွေရဲ့ ထူးခြားထင်ရှားချက်က သူတို့တွေဟာ သူတို့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့ ပြည်သူ့အကျိုးပြု လုပ်ငန်း၊ လူမှုရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းကနေ ဘယ်လို အခကြေးငွေ တံစိုးလက်ဆောင် တစ်စုံတစ်ရာကိုမှ မယူခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်.. သူတို့ဟာ လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွေကို အားကြိုးမာန်တက် အခမဲ့ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ကြသလို သူတို့မှာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် သူတို့ ကူညီပေးနေတဲ့ လူမှုရေးအကျိုးပြုကိစ္စတွေနဲ့ ဘယ်လိုမှ မသက်ဆိုင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေ ရှိသော သီးသန့်အလုပ်အကိုင် ကိုယ်စီ ရှိထားကြပါတယ်..
စူပါမင်းဟာ သတင်းထောက်တစ်ယောက်အဖြစ် ၀င်ငွေ ရှိသလို လင်းနို့လူသားဟာ ချမ်းသာတဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်အဖြစ် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း ရှိသူဖြစ်ပါတယ်.. ပင့်ကူလူသားကျတော့ ဓာတ်ပုံဆရာ ပီတာပါကာအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုပြီးတော့ သံမဏိလူသားကျတော့ တိုနီစတတ် အဖြစ်နဲ့ စတပ် စက်မှုလုပ်ငန်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဖြစ်ပါတယ်.. သူတို့ ကူညီပေးလိုက်တဲ့ ၊ ကယ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ သူတွေဆီကနေ၊ လူထုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းတွေကနေ အကျိုးအမြတ် တစ်စုံတစ်ရာ၊ အခကြေးငွေ တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မယူကြဘဲ ကောင်းမှုဘက်ကနေ ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်ပြီး စိတ်သဘောထားမြင့်မြတ်စွာနဲ့ ပြည်သူတွေကို အခမဲ့ ကူညီနေသော လေးစားထိုက်ဖွယ် တကယ့် လူစွမ်းကောင်းတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်.. လူစွမ်းကောင်းဆိုတဲ့သူတွေက ဘာအခွင့်အရေးမှ မမျှော်ကိုးဘဲ စေတနာသက်သက်နဲ့ လူထုကို ကူညီပေးနေတာကြောင့်လည်း သူတို့တွေကို ပြည်သူတွေက ချစ်ခင် မြတ်နိုးကြတာဘဲပေါ့နော်...
အခုလည်း ငယ်စဉ်ကျွန်မရဲ့ အိပ်မက်ကို ပြန်စဉ်းစားမိရင်းက ဒေါက်တာ မာရီလင်ရဲ့ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွေ ဆီကနေ အခကြေးငွေ မယူခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကို ပြောပြနေတဲ့ စကားတွေကို ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်စွာ နားထောင်နေမိပါတယ်.. ဟုတ်ပါတယ်.. သူဟာ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ၊ ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းတွေ၊ မသန်မစွမ်းသူများ စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ဆောင်းပါးတွေ စာတွေ မြောက်မြားစွာ ရေးခဲ့ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ အဲဒါတွေအတွက် အခကြေးငွေ မယူခဲ့တဲ့သူပါ။ သူပြောတာက “တကယ့် လူစွမ်းကောင်းတွေဟာ သူတို့ဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကနေ ဘယ်တော့မှ အခကြေးငွေ မယူကြပါဘူးတဲ့…” ဒီလိုလူမျိုးတွေကို လူစွမ်းကောင်းတွေလို့ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်တဲ့… လူတိုင်းဟာလည်း မိမိပါတ်ဝန်းကျင်လေးကို တတ်နိုင်သလောက် အကျိုးပြုရင်း လူစွမ်းကောင်းအလုပ်ကို လုပ်ခွင့်ရနိုင်ကြပါတယ်တဲ့…
အိုး . ဟုတ်သားဘဲနော်.. တကယ်တမ်းတော့ ကျွန်မဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ လူစွမ်းကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀ဟာ ခုချိန်မှာ တကယ်ကို ဖြစ်လာနေတာပါဘဲလား.. ဒါကို ကျွန်မက သတိမထားမိခဲ့ဘူး… ကျွန်မဟာ မျက်မမြင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ စာသင်တဲ့အလုပ်ကို အခကြေးငွေမယူဘဲ စေတနာ့ဝန်ထမ်း လုပ်ပေးနေခဲ့တာ အတော်ကြာပါပြီ။ ဒီလိုဆို ကျွန်မဟာလည်း လူစွမ်းကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်နေခဲ့တယ် မဟုတ်လားနော်..
တစ်ခြားသူတွေလည်း ကိုယ့်ရဲ့ သားသမီးတွေကို စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကို တတ်အားသလောက် ကူညီပေးခြင်း၊ ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ အကူအညီ လိုအပ်သူများကို နည်းတယ်များတယ် သဘောမထားဘဲ ကူညီပေးနိုင်ခြင်း၊ မသန်မစွမ်းသူများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ကလေးသူငယ် စောင့်ရှောက်ခြင်း စတဲ့ လူမှု ပရဟိတအလုပ်တွေကို ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနိုင်ခြင်း၊ အခြားသူများအပေါ်မှာ အပြန်အလှန် ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ရာ မျှော်လင့်ချက် မထားဘဲ စေတနာအပြည့်နဲ့ကူညီဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် လူတိုင်းဟာ လူစွမ်းကောင်းတွေ ဖြစ်ခွင့် ရနိုင်ကြတယ် မဟုတ်ပါလားရှင်..
လူသားတွေ ကောင်းကျိုးကို ဆောင်ရွက်နေကြသူတွေ၊ ကောင်းမှုဘက်က ရပ်တည်ပြီး မကောင်းမှုကို ပြတ်ပြတ်သားသား တိုက်ထုတ်နေကြသူတွေ၊ ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ရာအတွက် မဟုတ်ဘဲ စေတနာမေတ္တာသက်သက်ဖြင့် လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေသူတွေကို လူတိုင်းက လူစွမ်းကောင်းတွေအဖြစ် ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှဲစွာ လက်ခံပြီး လေးစား ကြည်ညိုတတ်ကြတယ် မဟုတ်ပါလားနော်.. အခွင့်အရေးကို မျှော်ကိုးပြီး စေတနာမပါတဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ နံမည်တစ်လုံး ရယူနေသူများကိုတော့ ဘယ်သူကမှ သူရဲကောင်းတွေ၊ လူစွမ်းကောင်းတွေလို့ သတ်မှတ်ပြီး ချစ်ခင်ကြည်ညိုကြလိမ့်မယ် မထင်ပါဘူး...
တကယ်လို့များ သင်ရဲ့ ဘ၀မှာ အလေးစားဆုံး၊ လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး အားကျစရာအကောင်းဆုံး လူစွမ်းကောင်းဟာ ဘယ်သူများလဲလို့ ကျွန်မတို့ ကိုယ့်ရင်ထဲကို ပြန်ပြီး မေးကြည့်ကြမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲ စွန့်လွှတ်ခြင်း၊ အနစ်နာခံခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်သီးခံနိုင်စွမ်းရှိခြင်း၊ စိတ်သဘောထားမြင့်မြတ်ခြင်း၊ အခွင့်အရေးတစ်စုံတစ်ရာ မျှော်ကိုးမှုမရှိခြင်း စတဲ့ အရည်အချင်းများစွာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးကို မငဲ့ကွက်ဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ စွန့်လွှတ်ပြီး ပေးဆပ်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်တော့ ရင်ထဲက လူစွမ်းကောင်းအဖြစ် ကျွန်မတို့ ကိုယ်စီရဲ့ရင်ထဲမှာ ရှိနေလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်နော်။
Nathaniel Bronner Jr. ရဲ့ Super Hero ကို နှစ်သက်စွာ ဘာသာပြန်ခံစား ရေးဖွဲ့ပါသည်။
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, November 14, 2010 Sunday, November 14, 2010 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ဒီနေ့တော့ ဘလော့ကို အလည်ရောက်လာကြတဲ့ ကျွန်မရဲ့ မောင်နှမတွေကို ပျော်စရာနေ့လေးအတွက် အမှတ်တရ အထူးထမင်းဝိုင်းနဲ့ ဧည့်ခံပါမယ်…. ပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့ ဂုဏ်ပြုစားသောက်ပွဲလေး ပါဝင်ဆင်နွဲ ကျင်းပကြပါစို့လားနော်… အားလုံးလဲ ကျွန်မနဲ့ထပ်တူ ပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်.. ဒီထမင်းဝိုင်းမှာ ပါဝင်မဲ့ ဟင်းလျာတွေက ငါးပဲငပိပေါင်း၊ သီးစုံအစိမ်းကြော်၊ ကြက်သားကချင်ချက်၊ လက်ဖက်ပုဇွန် ကောင်လုံးမွှေးကြော်၊ ဂေါ်ရခါးသီးနဲ့ ဥနီကို အချဉ်သုပ်၊ အားလူးမွကြော်၊ ငါးဖယ်လုံးနဲ့ ပဲလိပ်ပြာရွက် ဟင်းချိုတို့ ဖြစ်ပါတယ်.. အခု ထမင်းပွဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အချို့သော ဟင်းချက်နည်းတွေကို ဖော်ပြပြီးသားဖြစ်တာမို့ မဖော်ပြရသေးတဲ့ ဟင်းတွေအတွက် ချက်နည်းကို ပြန်လည်ဝေမျှပါမယ်ရှင်။
ပထမဦးဆုံး ပေါင်းလိုတဲ့ ငါးကို ကြေးခွံခွာ၊ ဗိုက်ဖောက်ရေဆေး လုပ်ပြီးသကာလ ဓါးဖြင့် ပုံပါအတိုင်း မွန်းပါတယ်… ပြီးတော့ ငါးကို အရက်အနည်းငယ်၊ ဆား၊အချိုမှုန့် (အသားမှုန့်) တို့နဲ့ နယ်ပြီး အရသာတွေ ငါးထဲဝင်အောင် အချိန်အတန်ကြာ ထားလိုက်ပါတယ်..
အသုံးပြုမဲ့ ပဲငံပြာရည်နဲ့ ပဲငပိပုလင်း
ပုလင်းထဲက ပဲငပိ ဒီလောက်ထည့်မယ်နော်
ပဲငံပြာရည်၊ ပဲငပိ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ချင်း၊ ငရုပ်သီး နံနံ၊ အချိုမှုန့်၊ အသားမှုန့်
ပဲငံပြာရည်အကြည် စားပွဲတင်ဇွန်း တစ်ဇွန်းခန့်ကို ပန်းကန်လုံးတစ်ခုထဲ ထည့်ပါတယ်.. ရေအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း၊ ငရုပ်သီးအနည်းငယ်တို့ကို တောက်တောက်စင်းပြီး ရှမ်းနံနံ ပါးပါးလှီး၊ နှမ်းဆီ အနည်းငယ်နဲ့ ပဲငပိ ဇွန်းတစ်ဝက်ခန့် ၊ သကြားနည်းနည်း၊ အချိုမှုန့် ၊ အသားမှုန့်တို့ အားလုံးကို ရောမွှေပါတယ်..
ငါးကို ပန်းကန်ပြားတစ်ခုထဲထည့်လိုက်ပြီး ရောမွှေထားတဲ့ ပဲငံပြာရည်တို့ကို ငါးပေါ်လောင်းချလိုက်ပြီး နှံ့အောင် နယ်ပါမယ်..
ထို့နောက် ဒယ်အိုးတစ်ခုထဲရေထည့်ကာ ငါးထည့်ထားတဲ့ ပန်းကန်ပြားကို ဒယ်အိုးထဲ နေရာချပြီး ငါးကိုလုံအောင် အဖုံးဖုံးကာ ရေနွေးငွေ့ဖြင့် စတင်ပေါင်းပါတယ်.. ပန်းကန်ပြားအောက်မှာ ပန်းကန်လုံးတစ်လုံး ခံထားပါတယ်.. တစ်ဖက်ကျက်ရင် နောက်တစ်ဖက်ကို လှန်ပေးလို့ စုစုပေါင်း ၁၅ မိနစ်ခန့် အချိန်လောက်ဆို ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အနံ့အရသာ ကောင်းမွန်မွှေးကြိုင်နေတဲ့ ငါးပဲငပိပေါင်းကို ရပါတယ်..
ပန်းကန်ပြားတစ်ခုထဲ ထည့်ပြီး အပေါ်က အစိမ်းရောင်နံနံပင်များကို အလှဖြူးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ သုံးဆောင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့ ငါးပဲငပိပေါင်းတစ်ခွက် ရပါပြီရှင်။
နောက်ဟင်းတစ်မည်က သီးစုံအစိမ်းကြော်ပါ… ကျွန်မက အစိမ်းကြော်ဆိုရင် အရောင်လေးတွေ စုံအောင် ထည့်ရတာကို သဘောကျပါတယ်.. ဒါကြောင့် အခုကြော်ထားတဲ့ အစိမ်းကြော်မှာ ပြောင်းဖူးသေး ( Baby Corn)၊ ဥနီ၊ ငရုပ်ပွ အနီ၊ အစိမ်း၊ ရွှေပဲသီး တို့ကို အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်.
ကြက်သွန်ဖြူ ဓားပြားရိုက်ပြီး ဆီအိုးထဲထည့်လိုက်ပါတယ်.. ပြီးတော့ အသီးရောင်စုံတွေကို ဆီအိုးထဲထည့်၊ ဆားအချိုမှုန့်၊ ခရုဆီ၊ အသားမှုန့် တို့ကို ထည့်ပြီး မွှေပါမယ်.. ကော်မှုန့်နည်းနည်းကို ရေဖျော်ပြီး ထည့်ပါတယ်.. အသီးတွေ မနွမ်းခင် ခပ်ကျွတ်ကျွတ် အနေအထားမှာ ချလိုက်ရင် အရောင်လဲလှ အရသာလဲ ရှိတဲ့ သီးစုံအစိမ်းကြော် တစ်ခွက်ရပါပြီ။ အသီးတွေက ၀ါစိမ်းနီတော့ စုံသွားတာပါဘဲ.. ဒါတောင် အပြာရောင် အသီးမရှိလို့ မထည့်လိုက်ရဘူး... ရှိများရှိရင် ၀ါစိမ်းနီပြာဆိုပြီး နံမည်ပေးဦးမလို့း)
အာလူးမွကြော်ဖို့အတွက် အာလူးတွေကို အရင်ပြုတ်ပါတယ်.. အာလူးကျက်ပြီဆိုရင် ရေအေးနဲ့ ခနထားလိုက်ပြီး အခွံနွာ အသားတွေကို လက်နဲ့ အနည်းငယ်ခြေလိုက်ပါတယ်.. ပြီးတော့ ဆီအိုးတည် ဆီကျက်ရင် နနွင်းမှုန့်အနည်းငယ်ထည့် ၊ အာလူးခြေထားတာကိုထည့်ပြီး ဆားအချိုမှုန့်လေးထည့်ပြီး အနည်းငယ်ကြော်လိုက်ပြီး ပန်းကန်ပြားထဲထည့် နံနံပင်လေး အုပ်လိုက်ရင် အာလူးမွကြော် ရပါပြီနော်။
ငါးဆုပ်လုံး ပဲလိပ်ပြာဟင်းချိုအတွက် ပထမဆုံး အိုးတစ်လုံးနဲ့ ရေနွေးတည်ပါမယ်.. ကြက်သွန်ဖြူ ဓားပြားရိုက်ထည့်ပြီး ဆား၊ အချိုမှုန့် ထည့်ပြီး ငါးဆုပ်များကို နှစ်ခြမ်းခွဲပြီး ထည့်ပြုတ်ပါတယ်.. ငါးဆုပ်ကျက်ပါက ဟင်းအိုးဆူဆူထဲကို အရွက်ကြမ်းသင်ထားတဲ့ ပဲလိပ်ပြာရွက်ထည့်လိုက်ပြီး အပေါ့အငံမြည်းလို့ ပန်းကန်တစ်လုံးထဲထည့်ကာ အပေါ်က ငရုပ်ကောင်းမှုန့်လေး ဖြူးလိုက်ပါက ပူပူနွေးနွေး ငါးဆုပ်လုံး ပဲလိပ်ပြာဟင်းချို ရပါပြီ။
ဂေါ်ရခါးသီး ဥနီ အချဉ်သုပ်
ခေါ်ရခါးသီး၊ ဥနီ အစိမ်း အချဉ်သုပ်
ဂေါ်ရခါးသီးနဲ့ ဥနီ အချဉ်သုပ်ဖို့အတွက် ဂေါ်ရခါးသီးကို အခွံခွာ၊ ပါးပါးလှီးပြီး အချောင်းသေးသေးလေးများ ရအောင် လှီးပါမယ်.. ဥနီကိုလည်း ပါးပါးလှီးပြီး အချောင်းသေးရှည်ရှည် မျှင်မျှင်လေးတွေ လှီးပြီး ကျွတ်အောင် ရေစိမ်ထားပါမယ်.. စားခါနီးမှာ ကြက်သွန်နီ၊ ငရုပ်သီးစိမ်း၊ ပုဇွန်ခြောက်၊ နံနံ၊ သံပုရာသီး (ရှာလကာရည်)၊ ဆား၊အချိုမှုန့် တို့နဲ့ နယ်ပြီး အပေါ်က နှမ်းလှော်ကို ဖြူးလိုက်ရင် အချဉ်သုပ်တစ်ခွက်ရပါပြီ။
ဆီနည်းနည်း အချဉ်အစပ် များများနဲ့ ကြက်သားကချင်ချက်
ကြက်သားကချင်ချက်ကို ဟိုးအရင်ကတင်ခဲ့ဖူးပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ချက်နည်းကို ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် ကြက်သားကို ရေဆေးပြီး အတုံးအနေတော်လေးများ တုံးပါတယ်.. ငရုပ်သီးများများ၊ ကြက်သွန်ဖြူနီ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ နံနံ၊ ဖက်ဖယ်ရွက်၊ မက်လင်ချဉ်သီးအခြောက် ပါးပါးလှီး၊ ဆား၊ အချိုမှုန့်၊ ဆီအနည်းငယ်၊ ကြက်သားနဲ့တကွ အရောင်တင်၊ နနွင်းမှုန့်နဲ့ အဆာပလာအားလုံးကို အိုးတစ်လုံးထဲထည့် ရေထည့်ပြီး ကြက်သားနူးအောင် ချက်လိုက်ရင် အချဉ်နဲ့ အစပ် အရသာကဲတဲ့ ကြက်သားကချင်ချက် ရပါတယ်.. ကချင်ချက်မှာ မပါမဖြစ်ထည့်တာက ဖက်ဖယ်ရွက် ဖြစ်ပါတယ်.. မက်လင်သီးမရရင် ရတဲ့အချဉ်နဲ့ ချက်နိုင်ပါတယ်.. ဆီအနည်းငယ်သာ ထည့်ဖို့လိုပါတယ်..
လက်ဖက် ပုဇွန်ကောင်လုံးမွှေးကြော်နည်းကို ဒီစာမျက်နှာအောက်မှာတင် ဖော်ပြပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် ထပ်ပြီး မရေးပြတော့ပါဘူးရှင်.. ဒီနေ့တော့ လက်ဖက်ခြောက်ခပ်များများနဲ့ ကြော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်... အားလုံးဘဲ ပျော်ရွှင်စိတ်ကြည်လင်စွာ သုံးဆောင် စားသောက်ကြပါနော်။
လူတိုင်းပျော်ရွှင်ဝမ်းသာ စိတ်ချမ်းသာသော နေ့ကလေးအတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ ထမင်းဝိုင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်... နောင်လာမဲ့ နေ့ရက်တိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းတွေ၊ ကောင်းသော မျှော်လင့်ခြင်းတွေ ယူဆောင်ပေးသော နေ့ရက်များ ဖြစ်ကြပါစေရှင်..
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Friday, November 12, 2010 Friday, November 12, 2010 Labels: သုတအဖြာဖြာ
ဒီနေ့တော့ ကျွန်မနှစ်သက်သဘောကျတဲ့ ကျူးလစ်ပန်းလေးတွေရဲ့ အကြောင်းလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်.. ဒီကျူးလစ်ပန်းဟာ .. ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရေပန်းစားထင်ရှားတဲ့ပန်းဖြစ်ပေမဲ့ ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ မရှိသလောက် ရှားပါးတဲ့အတွက် ဒီပန်းကို ငယ်စဉ်ကတည်းက စာအုပ်တွေမှာသာ မြင်ဖူးခဲ့ရတာမို့ ကျွန်မ စိတ်ဝင်စားမိတဲ့ ပန်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်.. ဆွဲဆောင်မှုကောင်းလှတဲ့ အရောင်အသွေး စုံလင်စွာနဲ့ တင့်တယ်လှပပြီး အခမ်းအနားတွေ၊ ပွဲလမ်းသဘင်တွေအတွက် အထူးသင့်တော်တဲ့ပန်းဖြစ်ပြီး ဥရောပမှာတော့ ကျူးလစ်ပန်းဟာ မင်္ဂလာအခမ်းအနားတွေမှာ အသုံးများတဲ့ပန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်.. နေ့ထူးနေ့မြတ်များ၊ နှစ်ပတ်လည်နေ့များ အတွက်လည်း လက်ဆောင် အပေးများဆုံး ပန်းထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်.. အချို့ ကျူးလစ်အမျိုးအစားတွေဟာ ခပ်သင်းသင်းမွှေးတဲ့ ရနံ့လေးရှိပြီး အရောင်အမျိုးစုံလင်လှသလို အရောင်ကိုလိုက်ပြီး အဓိပ္ပါယ်များကိုလည်း ခွဲခြားထားကြောင်း သိရပါတယ်.. အောက်မှာတော့ ကျွန်မ စုဆောင်းထားတဲ့ အင်မတန်လှပ ဆွဲဆောင်မှုရှိလှတဲ့ ကျူးလစ်ပန်းခင်းပုံများနဲ့ ကျူးလစ်ပန်းအကြောင်း အနည်းငယ်ကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
ကျူးလစ်ပန်းဟာ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ချက်ထားခြင်း၊ ပြည့်စုံသောချစ်ခြင်းနဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာတရားကို ဖော်ကျူးခြင်း တို့ရဲ့ သင်္ကေတ လို့ လက်ခံယုံကြည်ကြပါတယ် ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ အထူးထင်ရှား ကျော်ကြားသော်လည်း ကျူးလစ်ပန်းရဲ့ မူလအစဟာ အာရှအလယ်ပိုင်းမှာ တောင်စောင်းတွေ၊ အေးတဲ့နေရာတွေမှာ သဘာဝအတိုင်း ပေါက်ရောက်သော အပင်အဖြစ် ပထမဦးဆုံး တွေ့ရှိရတာဖြစ်ပြီး ပါးရှားနဲ့ တူရကီနိုင်ငံမှာတော့ အေဒီ ၁၀၀၀ခုနှစ်ထက် စောပြီး စိုက်ပျိုးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်. ကျူးလစ်ပန်းကို ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထင်ရှားလာအောင် စပြီး မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သူက သြစတြီးယန်း ရုက္ခဗေဒပညာရှင် Carolus Clusius ဖြစ်ပါတယ်.. သူဟာ ကျူးလစ်ပန်းများကို ပထမဦးဆုံး အကြီးအကျယ် စိုက်ပျိုးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်. ယခုအချိန်မှာတော့ မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ကျူးလစ်ပန်း အမျိုးအစားပေါင်း ၃၀၀၀ခန့် ရှိနေပြီး နှစ်စဉ် ကျူးလစ်ပန်း သန်းပေါင်းများစွာကို ကမ္ဘာတစ်ဝှန်းလုံး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် ရောင်းချကြပါတယ်.. သမိုင်းအထောက်အထားများအရ ဥရောပတိုက်မှာ ကျူးလစ်ပန်းကို အော်သိုမန် အင်ပါယာခေတ်မှာ စတင် စိုက်ပျိုးခဲ့တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်..
ကျူးလစ်ပန်းဟာ နွေဦးရာသီမှာ လှပဝေစီစွာ ဖူးပွင့်ပြီးတော့ သစ္စာပန်းတို့လို ဥကနေ စိုက်ပျိုးတဲ့အပင် အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်.. သူ့ရဲ့ မျိုးစိတ်ပေါ်မူတည်ပြီး ပင်စည်ဟာ အရှည်၎လက်မကနေ ၂၈လက်မအထိ ရှိနိုင်ပါတယ်.. အများအားဖြင့် ပင်စည်ရိုးတံ တစ်ခုမှာ တစ်ပွင့်တည်းသာ ပွင့်တတ်သောပန်း ဖြစ်သော်လည်း အချို့သော ကျူးလစ်အမျိုးအစားကတော့ ရိုးတံတစ်ခုမှာ အပွင့်၎ပွင့်အထိ ပွင့်နိုင်ပါတယ်.. အပြာရောင်မှလွဲ၍ အရောင်မျိုးစုံ ရှိပြီး ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ အရောင်စပ်ကြားများလည်း ရှိပါတယ်.. ပန်းပွင့်ပုံသဏ္ဍာန်မှာ ခွက်တစ်ခုပမာ ရှိပြီး ကျူးလစ်ပန်းပင်တစ်ပင်မှာ အရွက် ၂ရွက်မှ ၆ရွက်အထိ ရှိတတ်ပြီး အချို့မျိုးစိတ်မှာတော့ ၁၂ရွက်အထိ ရှိတတ်ကြောင်း သိရပါတယ်… အရွက်ပုံသဏ္ဍာန်မှာ ရှည်လျားပြီး အပေါ်မျက်နှာပြင် ဖယောင်းသားကဲ့သို့ ချောပြောင်နေကာ စိမ်းစိုတောက်ပလျှက် ရှိပါတယ်.. အလွန်ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော မြေဧကပေါင်းများစွာမှာ တစ်ရောင်စီ ခွဲခြား စိုက်ပျိုးတတ်တာကြောင့် ကျူးလစ်ပန်းခင်းများဟာ ရှုချင်စဖွယ် မျက်စိပသာဒရှိလှပြီး ဓာတ်ပုံဝါသနာအိုးများအတွက်လည်း စွဲမက်ဖွယ် ကောင်းလှပါတယ်.. အရောင်စုံကို ရောထွေးစိုက်ပျိုးတာမဟုတ်ဘဲ တစ်မျိုးကို တစ်ကန့်စီသော်လည်းကောင်း၊ တစ်ကွက်စီသော်လည်းကောင်း စိုက်ပျိုးကြတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့အရောင် သူ့အကန့်နဲ့သူ အရောင်စုံ၊ အကွက်စုံမို့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသလို လှလည်းအလွန်လှပါတယ်..
ကျူးလစ်ပန်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်သော်လည်း ကျူးလစ်ပန်းတို့ရဲ့ သဘာဝအရ အပွင့်များကို ခူးဆွတ်ပြီး မြေကြီးထဲကျန်သော ဥများကို ဇွန်လတွင် တူးဖော်သိမ်းဆည်းကာ စက်တင်ဘာလတွင် ပြန်လည် စိုက်ပျိုးကြပါတယ်.. အေးမြတဲ့ .. နွေနှောင်းနဲ့ ဆောင်းရာသီတို့မှာ မြေကို ကောင်းစွာထွန်ယက်ပြီး လေးလက်မမှ ၈လက်မအထိ မြေအနက်မှာ စိုက်ပျိုးကြတာ များပါတယ်.. ရှည်လျားတဲ့ ဆောင်းရာသီမရှိသော အချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ ကျူးလစ်ပန်းဥကို ၁၂လက်မအထိ မြေကြီးထဲ မြုပ်နှံကာ စိုက်ပျိုးကြရပါတယ်.. အဲဒီလိုစိုက်ပျိုးတာဟာ ပူပြင်းတဲ့ နေရောင်ဒဏ်မှ ကာကွယ်ဖို့ရယ် အပင်မပေါက်နိုင်တဲ့ ဥသေးဥမွှားများ ဖြစ်မလာဘဲ အပင်ကြီးမားသန်စွမ်းမဲ့ ဥကြီးတစ်ခုတည်းသာ ဖြစ်စေပြီး အပွင့်လှလှ ရနိုင်ဖို့အတွက်ရယ် ဖြစ်ပါတယ်… ကျူးလစ်ပန်းဥတစ်လုံး သေးငယ်သောအရွယ်မှ ပန်းပွင့်များ ပွင့်နိုင်တဲ့အရွယ် ရောက်ဖို့ ၅နှစ်မှ ၈နှစ်အထိ အချိန်ယူရတယ်လို့ သိရပါတယ်.. စိုက်ပျိုးနိုင်သော အရွယ်ရောက်တဲ့ ဥတွေကိုမှသာ အရွယ်အစားအလိုက် ဈေးကွက်မှာ ရောင်းချကြပါတယ်.. ဥအရွယ်အစား ကြီးမားလေ ပန်းပွင့်အရွယ်ကြီးမားလေဖြစ်ကြောင့် သိရပါတယ်.. ပန်းပွင့်ဖို့အရွယ်မရောက်သေးသော ဥငယ်များကိုတော့ မြေကြီးထဲမှာ ပြန်လည်မြုပ်နှံပြီး ကြီးထွားလာအောင် ထားကြရပါတယ်.. ကျူးလစ်ပန်းပွင့်များကို ခူးဆွတ်ပြီးခဲ့သော်မှ အပင်ကို ခုတ်ပစ်ခြင်းမပြုရဘဲ နောက်တစ်ရာသီ စိုက်ပျိုးချိန်အတွက် ကျူးလစ်ဥများ အင်အားပြည့်ကြီးထွားလာဖို့ အပင်များ အလိုလို သေဆုံးသွားသည်အထိ မြေကြီးထဲမှာ ဆက်လက် ထားရှိရပါတယ်.. တကယ်လို့ သင့်အိမ်မှာ ကြက်သွန်နီ ကုန်နေတယ်ဆိုခဲ့ရင် ကြက်သွန်နီအစား ကျူးလစ်ပန်းဥကို အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကျူးလစ်ပန်းကို ၁၆၃၆- ၃၇ခုနှစ်မှာ နယ်သာလန် ( ဟော်လန်) နိုင်ငံမှာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိခြင်း၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်း ပြယုဒ်အနေနဲ့လည်း စိုက်ပျိုးသူများ ရှိကြပါတယ်.. အဲဒီခေတ်က ကျူးလစ်ပန်းများကို ငွေကြေးတစ်ရပ်ကဲ့သို့ ကုန်သွယ် ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရပါတယ်.. ထိုအချိန်ကတည်းက ဆန်းပြားသော အရောင်မျိုးစုံလည်း ပေါ်ထွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်.. ရှားပါးသော တန်ဖိုးကြီး ကျူးလစ်ပန်းဥ တစ်ဥသည်ပင် အိမ်တစ်လုံးဝယ်နိုင်သည့် ပမာဏခန့်မျှ ငွေကြေးဖြင့် ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြကြောင်း ဗဟုသုတအနေနဲ့ မှတ်သားရပါတယ်.. ကျူးလစ်ပန်း၏ တန်ဖိုးအဆင့်အတန်းကို ပန်းတွင်ပါဝင်သော အရောင်များကိုကြည့်ကာ ခွဲခြား သတ်မှတ်ကြပါတယ်.. ခုခေတ်တွင်တော့ ကျူးလစ်ပန်းစိုက်ပျိုးသူများဟာ အရောင်မျိုးစုံရအောင် မျိုးစပ်ပြီး စိုက်ပျိုးနိုင်ကြပြီ ဖြစ်သလို စိုက်ပျိုးတဲ့ နည်းပညာတွေလည်း ပိုမိုတိုးတက်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်.. ကျူးလစ်ပန်းဟာ ဟော်လန်နိုင်ငံရဲ့ အထိမ်းအမှတ်ပန်းလို့ ပြောနိုင်လောက်အောင် တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ကျူးလစ်ပန်းခင်းများ လှပဆန်းကျယ်စွာ စိုက်ပျိုးကြပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအနှံ့အပြားကို တင်ပို့ရောင်းချတာကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျူးလစ်ပန်းကို စီးပွားဖြစ် အကြီးအကျယ် စိုက်ပျိုးရောင်းချတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တာနဲ့အညီ တစ်နှစ်ကို ကျူးလစ်ပန်းဥပေါင်း သန်း၃၀၀၀ ခန့် ထုတ်လုပ်ရောင်းချပါတယ်..
ပန်းကလေးတွေဟာ အဓိပ္ပါယ် အသီးသီးရှိတာမို့ မိမိပြောလိုတဲ့ စကားတွေကို နှုတ်က ဖွင့်ဟစရာမလိုဘဲ ပန်းတွေမှာရှိတဲ့ ကိုယ်စားပြု အဓိပ္ပါယ်လေးတွေနဲ့ မိမိပြောလိုတဲ့စကားတွေကို လိုက်ဖက်တဲ့ ပန်းအရောင်တွေ ရွေးချယ် လက်ဆောင်ပေးပြီး ပြောလို့ရပါတယ်.. ကျူးလစ်ပန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရောင်တစ်ချို့ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်မှာ အနီရောင်သည် “ငါ့ကိုယုံကြည်ပါ” ဟူသော အဓိပ္ပါယ် ရသကဲ့သို့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖွင့်ဟ၀န်ခံရာတွင်လည်း အနီရောင် ကျူးလစ်ပန်းဖြင့် ဖွင့်ဟ ၀န်ခံကြပါတယ်.. အ၀ါရောင် ကျူးလစ်ပန်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်မှာ နေရောင်ခြည်လို တောက်ပတဲ့အပြုံးလေးလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖြင့် ပေးကြသလို ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုလည်း ကိုယ်စားပြုပါတယ်.. ခရင်မ်ရောင် ကျူးလစ်ပန်းက မင်းကိုထာဝရချစ်နေမယ်၊ အဖြူဆွတ်ဆွတ် ကျူးလစ်ပန်းက ကောင်းကင်ဘုံ၊ သစ်လွင်တောက်ပခြင်း၊ သန့်စင်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်.. ခရမ်းရောင်က တော်ဝင်ဆန်ခြင်း မြင့်မြတ်ခြင်း၊ ပန်းရောင်က ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ဂရုစိုက် နွေးထွေးခြင်း၊ လိမ္မော်ရောင် ကျူးလစ်ပန်းကတော့ ခွန်အားရှိခြင်း၊ စိတ်အားထက်သန်ခြင်း၊ စိတ်ကူးဥာဏ်ကွန့်မြူးခြင်း၊ ရမ္မက်စိတ်ထက်သန်ခြင်း စသဖြင့် အသီးအသီး ကိုယ်စားပြု အဓိပ္ပါယ်များရှိကြောင်း မှတ်သားရပါတယ်..
အ၀ါထဲက တစ်ပွင့်တည်းသော အနီ
အမေရိကန်နိုင်ငံ ၀ါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ အနောက်မြောက် ဆီယာတယ်မြို့ရဲ့ မြောက်ဘက် မိုင်၆၀အကွာက Skagit Velly တစ်ဝိုက်မှာတော့ ကျူးလစ်ပန်းပွဲတော်ကို နှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်.. အဲဒီပွဲတော်ချိန်မှာ ဧကပေါင်း ရာနဲ့ချီပြီး ကျယ်ဝန်းတဲ့ ကျူးလစ်ပန်းခင်းကြီးတွေဟာ အရောင်စုံ အသွေးစုံ မျက်စိတစ်ဆုံး၊ လျှောက်လည်၍ပင် မဆုံးနိုင်အောင် ပြန့်ပြောကျယ်ဝန်းလှပြီး လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ ဧည့်သည် အရေအတွက်ဟာလည်း များပြားလှပါတယ်.. ရောက်လာသူတိုင်း ရင်သပ်ရှုမောကြရလောက်အောင် ပန်းပင်လယ်ကြီးဟာ အချင်းမိုင်အားဖြင့် ၁၅မိုင်ခန့် ကျယ်ဝန်းတယ်လို့ သိရပါတယ်.. ကျူးလစ်ပန်းပွဲတော်ကို ပန်းတွေအားလုံး စုံညီစွာ ဖူးပွင့်ကြတဲ့ ဧပြီ ၁ရက်နေ့မှ ၃၀ရက်အထိ ၄င်းဒေသမှာ နှစ်စဉ် ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်.. ဒီလောက်ကျယ်ဝန်းပြီးး အရောင်စုံစွာလှပတဲ့ အိပ်မက်ဆန်ဆန် ပန်းခင်းကြီးကို ကြည့်ရဖို့ ဘယ်လောက်များ ရင်ခုန်စရာ ကောင်းလိုက်မလဲနော်။ အခွင့်အရေးများရရင် အဲဒီပန်းပွဲတော်ကြီးကို သွားကြည့်ချင်မိပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ကျူးလစ်ပန်းပွဲတော်ကြီးကို မရောက်နိုင်သေးခင်မှာ ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရင်းဘဲ စိတ်အပန်းဖြေကြရအောင်လားရှင်။
ဒီကျူးလစ်ပန်းကိုတော့ ကျွန်မနှစ်သက်တဲ့ပန်းတစ်မျိုးမို့ အချက်အလက်များ၊ ဓာတ်ပုံများ စတာတွေကို နှစ်သက်စွာ စုဆောင်းထားသမျှ မျက်စိပသာဒဖြစ်စွာ ဖတ်ရှုခံစားနိုင်ဖို့ ပြန်လည်ဝေမျှခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ရှင်..
Sources and photos from Google
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, November 10, 2010 Wednesday, November 10, 2010 Labels: ထူးဆန်းထွေလာ
ရေကန်ငယ်လေးများစွာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဆားရေကန်ကြီးဟာ ကနေဒါနိုင်ငံ၊ ဘရစ်တစ်ကိုလံဘီယာနယ်ရဲ့ အနောက်မြောက်မှာရှိတဲ့ Osoyoos မြို့အနီးမှာ တည်ရှိပါတယ်.. အဲဒီရေကန်ငယ်ကလေးတွေထဲက ရေဟာ ဓါတုပစ္စည်း ပျော်ဝင်မှု အလွန်များပြားပြီး အမျိုးပေါင်းစုံလင်စွာသော ဓါတ်သတ္တုများ ပျော်ဝင်နေပါတယ်.. နွေရာသီအခါမှာ ရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေဟာ အငွေ့ပျံခြောက်ခမ်းသွားပြီးတဲ့နောက် ကန်ထဲမှာ ဓာတ်သတ္တုတွေသာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်.. ရေကန်ထဲမှာတော့ ဓါတုပစ္စည်းကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ နေရာအနေအထားပေါ် မူတည်ပြီး မတူညီတဲ့ အရောင်အသွေးနဲ့ ကန်ငယ်လေးပေါင်းများစွာ အကွက်အကွက်လိုက် ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်.. ကန်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာ အရောင်မျိုးစုံလင်လှတဲ့ အကွက်အပျောက်ငယ် ကလေးတွေအဖြစ် ထူးဆန်းလှပစွာ ဖြစ်ပေါ်နေစေပါတော့တယ်..
ရေတွေခမ်းခြောက်ပြီး ဆားနဲ့ သတ္တုတွေသာကျန်ရစ်နေတဲ့ ရေကန်
မဂ္ဂနီစီယမ် ဆာလ်ဖိတ်အများဆုံး ပါဝင်နေတဲ့ ရေကန်ငယ်လေးပေါင်းများစွာဟာ နွေရာသီအခါမှာတော့ ပုံဆောင်ခဲလေးတွေအဖြစ် ကျန်နေရစ်တတ်ပါတယ်… ရေတွေခမ်းခြောက်သွားပြီးတဲ့နောက် ရေကန်ငယ်လေးတွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ လူသွားလို့ရတဲ့ လမ်းသဖွယ် ဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့ပါတယ်.. အဲဒီရေကန်ငယ်လေးတွေထဲမှာ မဂ္ဂနီစီယမ် ၊ကယ်လ်စီယမ်နဲ့ ဆိုဒီယမ်ဆာလ်ဖိတ် ပါဝင်မှုနှုန်းဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်… ငွေ နဲ့ တိုက်တေနီယမ် သတ္တုတွေပါ ပါဝင်နေပြီးတော့ ၄င်း သတ္တုတွေ၊ ဓါတုပစ္စည်းတွေကြောင့်ဘဲ အရောင်စုံ အကွက်ပေါင်း ၃၆၅ ကွက်ခန့် မြောက်များစွာ ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့် အဲဒီရေကန်ကို Spotted Lake လူသိများပါတယ်.. အဖြူရောင်၊ အစိမ်းဖျော့ရောင်၊ အ၀ါရောင် စသဖြင့် အရောင်စုံအောင် ဖြစ်ပေါ်နေစေပါတယ်.
ရေကန်ရဲ့ ရှုခင်း တစ်မျိုး
အဲဒီရေကန်ကြီးဟာ ရောဂါဘယတွေကို ကုသပေးနိုင်စွမ်း ရှိတယ်လို့ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုတွေက ယုံကြည်ကြပြီးတော့ အစဉ်အဆက် တန်ဖိုးထားထိမ်းသိမ်းခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်.. မတူညီတဲ့ သတ္တုပါဝင်မှုနှုန်းတွေကြောင့်လည်း အဲဒီစက်ဝိုင်းပုံ ကန်ငယ်လေးတွေရဲ့ ရောဂါပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိဟာလည်း မတူညီ ကွဲပြားတယ်လို့ ယုံကြည်လက်ခံကြပါတယ်.. ကန်ကြီးထဲကို အလည်အပတ်သွားရောက်ကြမဲ့ ဧည့်သည်တွေဟာလည်း ကန်ကြီးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေတဲ့ သူတို့ဆီက ခွင့်ပြုချက်ယူရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်.. အချိန်မရွေး သွားရောက် လည်ပတ်နိုင်ပေမဲ့ အကောင်းဆုံးကာလက ဇွန်ကနေ စက်တင်ဘာဆိုရင် ရေတွေခမ်းခြောက်ပြီး ရေကန်တစ်ခုလုံးဟာ အကွက်လေးတွေ ဖြစ်နေတာမို့ ရှုခင်းအလှဆုံး အချိန်လို့ သိရပါတယ်.. ရောဂါရှိတဲ့သူတွေ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ရောဂါတွေ ပျောက်အောင် ဒီရေကန်ကိုအလည်သွားသင့်ပါတယ်နော်။ သွားဖြစ်အောင် သွားပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်.. :) :)
ထူးထူးခြားခြား အပင်များနဲ့ ဆိုဂိုထရာကျွန်း
ရီမင်နိုင်ငံရဲ့ ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်တဲ့ ဆိုဂိုထရာကျွန်းကလေးဟာ ကမ္ဘာပေါ်က ထူးဆန်းတဲ့ ဒေသတစ်ခုထဲမှာ အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်.. အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာထဲက ကျွန်းစုလေးဖြစ်တဲ့ ဆိုဂိုထရာကျွန်းဟာ လူသူအရောက်အပါက်နည်းပြီးတော့ သီးခြားကမ္ဘာငယ်လေးတစ်ခုလို ဖြစ်နေတာကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ ရှေးနှစ်သန်းပေါင်း ၂၀ ကတည်းက ရှိခဲ့ပြီး ယခုလက်ရှိ ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်ဒေသမှာမှ မတွေ့နိုင်တော့တဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း ရှားပါးအပင်တွေ၊ သတ္တ၀ါမျိုးစိတ်ပေါင်း ၇၀၀ ကျော်ခန့်ကို တွေ့ရှိရတာကြောင့် ကမ္ဘာမြေပေါ်က ကျွန်းနဲ့မတူဘဲ ဂြိုလ်သားတွေရဲ့ နေရာဒေသတစ်ခုနဲ့ တူနေတာမို့ ထူးဆန်းတဲ့ဒေသတစ်ခုအဖြစ် ထင်ရှားလာတာ ဖြစ်ပါတယ်..
ဆိုဂိုထရာကျွန်းပေါ်က Dragon's Blood အပင်များ
ဆင်ခြေထောက်ကြီးနဲ့ တူတဲ့ ကြီးမားတဲ့ ကန္တာရ နှင်းဆီပင်ကြီးတွေလဲ ရှိပါရဲ့။
အချို့ကတော့ အဲဒီ ဆိုဂိုထရာ ကျွန်းကလေးကို စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာထဲက နယ်မြေလေးလို့ တင်စား ခေါ်တတ်ကြပါတယ်.. လှပဖြူဖွေးတဲ့ သဲသောင်ပြင်နဲ့အတူ တာကွိုဇ် ကျောက်ဆောင်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ကမ်းခြေရှိပြီးတော့ ထုံးကျောက်တောင်ကြီးတွေဆီကို တဖြေးဖြေး မြင့်တက်သွားကာ ကျောက်ဆောင်တွေလည်း ပတ်လည်ဝန်းရံလို့နေပါတယ်.. အဲဒီကျောက်တောင်တွေမှာလည်း လိုဏ်ဂူတွေများစွာ ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်..ကျွန်းပေါ်မှာတော့ ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ ရာသီဥတု ရှိပါတယ်.. နီရဲနေတဲ့ ပင်စည်ကိုင်းတွေရှိပြီး ကောင်းကင်ပြင်ပေါ် ပြန့်ကားကာ ပျံတက်နေတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ရှိ နဂါးသွေးပင် Dragon’s Blood ၊ ကန္တာရနှင်းဆီပင်ကြီးများနှင့် ထူးခြားဆန်းကျယ်တဲ့ အပင်များစွာ ကိုလည်း တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်.. ရေငုတ်ဝါသနာပါသူများအတွက်လည်း အာရေဘီယံ ပင်လယ်ပြင်ကြီးထဲမှာ လှပတဲ့ ရေအောက်ရှုခင်းတွေ သန္တာကျောက်တန်းကြီးတွေကို ကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်..
ဆိုဂိုထရာကျွန်းရဲ့ လှပတဲ့ သဲသောင်ကမ်းခြေ
ပညာရှင်တွေကတော့ ကျွန်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့အပင်တွေ၊ ငှက်တွေ ထူးဆန်းရှားပါးသတ္တ၀ါတွေရဲ့ စာရင်းတွေကို လေ့လာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းတွေ စတင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်.. စာရင်းမှတ်တမ်း မ၀င်သေးတဲ့ ထူးဆန်းအပင်တွေ သတ္တ၀ါမျိုးစိတ်တွေ အများကြီး ရှိနေသေးကြောင်း သိရှိရပါတယ်..
Sources and Photos from :
http://www.greenmuze.com/nature/water/1947-canadas-spotted-lake-.html and google